thinzar's blog: Conference ဒုတိယပိုင်း
~~မနေ့ကရေးခဲ့တဲ့ ကွန်ဖရင့် နောက်ဆက်တွဲပါ။~~
အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာ သားသမီးတွေကို အနီးကပ် ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် အလုပ်ထွက်လိုက်ပြီး အိမ်ကနေဘဲ online bookstore ဖွင့်ပြီး အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ အသက်၃၀ဝန်းကျင် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးပြောသွားတာတွေဟာလည်း အားကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စီးပွါးရေးကို ဘယ်လို ကြော်ငြာခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး တစ်ချက်ပါ။ သူကတော့ ပိုက်ဆံမကုန်စေမယ့် ကြော်ငြာနည်း တွေကိုသာ သုံးခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ကိုယ့်ကို လူတွေ သိလာအောင် အရင်လုပ်ရမယ်။ သူ့ရဲ့ customer ဖြစ်လာနိုင်တာတွေက အင်တာနက်သုံးတဲ့ မိဘတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်နည်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဖိုရမ် ရေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဘလော့ဂ်မှာဝေမျှတယ်။ ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်သင့်တယ် ဆိုတာတွေကို အကြံပေးတယ်။ သူ့ဆိုင်မှာ ကလေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကို အဓိက ထားရောင်းတဲ့အတွက် ကြုံရင် ကြေငြာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သူရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အင်တာနက်လို virtual world မှာ လူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဥပမာ ကျမတို့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါလောကမှာကြည့်ရင် တစ်ချို့ ဘလော့ဂါ တွေကို လူတော်တော်များများက ယုံကြည်လေးစားကြတယ်။ သူ့တို့စေတနာတွေဟာ သူတို့ရေးတဲ့ စာတွေထဲကနေ ထင်ဟပ်နေတယ်။ virtual world မှာ ဟန်ဆောင် လိမ်ညာနေရင်လည်း ဘယ်သူသိမှာလည်း ဆိုပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကြာကြာဟန်မဆောင်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လက်တွေ့လောကနဲ့ personality သာ အနည်းငယ်ကွဲကောင်း ကွဲနိုင်ပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရတော့ သူတို့ရေးတဲ့စာတွေက အနည်းနဲ့ အများတော့ ထင်ဟပ်နေတာပါဘဲ။ (ကျမ ဘလော့ဂ်ဖတ်တာ နည်းနည်းတော့ လျှော့သင့်သလားဘဲ။ :D) conference အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ မြန်မာ ဘလော့ဂါတွေဆီ ဘယ်လို ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး။ ပြန်ဆက်ပါမယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ တစ်ခြားမိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို ကိုလည်း စာအုပ်ကောင်းတွေ ဖတ်စေချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ စေတနာကို အရင်းပြုပြီး တိုးတက်လာတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်ကို အသုံးချရင်း လုပ်ငန်း အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ marketing မှာ တော်တော် အရေးပါလာတဲ့ sms စနစ်အကြောင်း ရှင်းပြသွားခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကြော်ငြာ sms တွေ သိပ်မရတော့ပါလားလို့ ကြည့်နေတာ sms spam လုပ်ရင် တရားစွဲလို့ရတဲ့ ဥပဒေ ထုတ်တော့မှာမို့ကိုး။ မဟုတ်ရင် တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဖုန်းနံပါတ် ဒေတာတွေကို တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရောင်းပြီး ကြော်ငြာတွေပို့နေလို့ သိပ်စိတ်ရှုပ်ရတယ်။ Academi Fantasia, Malaysian Idol, Singapore Idol စတဲ့ တီဗီရှိုးတွေ sms ကနေ ရင်းဂစ် သိန်းပေါင်းများစွာ အမြတ်ရသွားတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ နားလည်သွားခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကသာ sms ပို့ဖို့ ဆယ်ပြား၊ ပြားနှစ်ဆယ်လောက်ကို နှမြောနေတာ။ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေက ငါးရာတစ်ထောင်လောက်တော့ အသာလေး ဖြုန်းကြတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မလေးရှားက နာမည်ကြီး ကာတွန်းဆရာ ဦးဘီ (အူဘီး) ဘယ်ဟာ အသံထွက် မှန်သလဲ မသိပါ။ အင်တာနက် ထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ ကာတွန်း ထုတ်ဝေသူတွေ ဒေဝါလီခံရလုနီးနီး ဖြစ်နေချိန်မှာ သူဟာ HTML ကို မတောက်တစ်ခေါက် လေ့လာ၊ website တစ်ခုလုပ် ပြီး အင်တာနက်မှာ သူ့ကိုယ်သူ ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ SEO (Search Engine Optimization) ကို လေ့လာပြီး သူ့ website hit တက်လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ မထင်မှတ်ထားတာက website ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ သူ့ကာတွန်းတွေကို တစ်ခြားနိုင်ငံက လူတွေ သဘောကျပြီး သူ့ကို ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာအတွက် ကာတွန်းလိုဂိုဆွဲပေးဖို့ အလုပ်အပ်တာကနေ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှု စပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် အခု သူဟာ နိုင်ငံပေါင်းမြောက်မြားစွားကနေ အလုပ်အပ်တာကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်တောင် ဝင်ငွေကောင်းသွားသလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ဘဏ်စာရင်းဟာ တစ်နေ့မှာ ငွေထုတ်လို့မရတော့တဲ့အထိ ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ အမှန်တော့ သူ့ဆီကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက customer တွေ လွှဲပေးတဲ့ငွေဟာ အတော်များလာတော့ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတယ်ဆိုပြီး ရဲခေါ်စစ်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားရတာပါ။ ကာတွန်းဆရာမှန်းသိမှ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ ကျမတို့နိုင်ငံက ကာတွန်းဆရာတွေလည်း အင်တာနက်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချမယ်ဆိုရင် သူ့လိုဘဲ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် funding မရနိုင်ရင်လဲ အင်တာနက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးစွဲခွင့်လေးသာရမယ်ဆိုရင် တိုးတက်နိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက အများကြီးပါဘဲ။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Ebay မှာ သူလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ချို့ ရှာဝယ်ပြီးနောက် ပစ္စည်းစမ်းရောင်းကြည့်ရာကနေ Ebay မှာ အချိန်ပြည့် ဈေးရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ consultant တစ်ယောက်ပါ။ သူကတော့ ယူကေ ဈေးကွက်ကို အဓိကထားပြီး ရောင်းလို့ရသမျှ အကုန်ရောင်းပါတယ်။ မလေးရှား လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေမှာ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုဝယ် ပြီး Ebay မှာတင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တွယ်ချိတ်တောင် ဝယ်တဲ့သူ ရှိပါသတဲ့။ သူပြောသလိုဆို ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းစရာပစ္စည်း အများကြီး ရှိတယ်နော်။ ကျောက်မျက်တို့၊ ကျောက်ပန်းချီ၊ ရှေးဟောင်းငွေစက္ကူ၊ စတာတွေကို Ebay ကနေ ရောင်းရင်လည်း မဆိုးဘူးလားလို့။ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းဘူးဆိုပြီးများ လာမလားမသိ။ မလွတ်ကင်းတာက နောက်မှ။ စာတိုက်ကြီးနဲ့ ပြဿနာတက်မှာက အရင်။ Paypal တို့ credit card တို့ကတော့ ထားပါ။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကူအညီ ယူလို့ ရသေးတယ်။ Ebay နဲ့ ကောင်းကောင်းစီးပွါးရေး လုပ်ချင်ရင် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ စာတိုက်က ပထမဘဲ။ မဖြစ်သေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး Ebay ကနေ ဈေးရောင်းစားမယ့် အကြံအစည်ကိုလည်း လောလောဆယ် ခဏဖျက်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။
စာလည်းတော်တော်ရှည်သွားပြီမို့ ဒီမှာဘဲ ရပ်လိုက်ပါ့မယ်။ conference က အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပေမယ့် ကျမရဲ့ စာအရေးအသားအားနည်းသေးတာကြောင့် ပြန်ပြီးဝေမျှချင်တာတွေ ထင်သလောက် ခရီးမရောက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ success stories တွေဆိုတော့ ကျမအတွက်တော့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ အခုလိုဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သဉ္ဇာ
3/12/08 9:13 AM
မနက်က ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး အားတွေတက်၊ ပြီးတော့ အပွကြံဖို့ ထိုင်စဉ်းစားနေမိခဲ့တယ်။ ခဏနေတော့ ဘစ်စနက် အိုင်ဒီယာတခုရပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရနဲ့ မဒမ့်ဆီကိုတောင် ဖုန်းဆက်ပြောပြလိုက်ရသေးတယ်။ သူကလည်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ပေါ့လေ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက်ပြောမပြဖို့ကိုလည်း အမြန်မှာရသေးတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖူးသူ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရှိဖူးသလားဆိုတာ သိရအောင် ဂူဂယ်လ်မှာ ရှာကြည့်လိုက်တော့ လား.....လား.........ဗမာလူမျိုးထဲမှာတင် အဲဒီအိုင်ဒီယာနဲ့ လုပ်စားနေလိုက်ကြတဲ့လူတွေဆိုတာ နဲတာဟုတ်ဘူး....အဟင့်။
3/12/08 10:54 PM
ကိုပီတိ>> စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ :) comment အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုပေါ>> ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအိုင်ဒီယာတွေ အသုံးချနေတဲ့သူတွေ ရှိမှာဘဲ။ အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမှ မနည်းတော့ဘဲ။ သို့သော်လည်းပဲ မြန်မာတွေထဲမှာ အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး စီးပွါးလုပ်နေတဲ့ percentage ဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင် အရမ်းနည်းနေသေးပါတယ်။
conference က speaker တွေ ပြောသွားတဲ့ပုံအရဆိုရင် အခုလုပ် အခုထအောင်မြင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဆိုရင် လေးငါးနှစ်လောက် ရင်းပြီးမှ အောင်မြင်မှု ရခဲ့တာလေ။ အဓိကကတော့ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိဖို့ဘဲ။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ creativity နည်းနည်း ရှိရင် ဖြစ်ပါတယ်။ beginner luck ဆိုတာကိုလည်း ယုံလို့ရသေးတယ်လေ။ ဥပမာ online မှာ စာအုပ်ရောင်းတဲ့ အစ်မကြီးဆိုရင် သူ့ရှေ့မှာ pioneer တွေ အများကြီးဘဲ။ Ebay တို့ Amazon တို့ ရှိတာဘဲ။ မလေးလူမျိုးတွေထဲမှာလည်း online bookstore ဖွင့်ထားတာ နည်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလုပ်ရင် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီး အားလျှော့ခဲ့ရင် သူဘယ်ကလာ အောင်မြင်တော့မလဲ။ အဲဒီတော့ သူက specific target အဖြစ် မလေးရှားမှာရှိတဲ့ မိဘတွေကို ရွေးလိုက်တယ်။ ပြီတော့ ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို တတ်နိုင်သမျှ share လုပ်တယ်။ အဓိကကတော့ လူတွေ ကိုယ့်ကို သိလာဖို့လေ။ လေးငါးနှစ်လောက်နေတော့ တော်တော်အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်သွားပြီ။
Ebay မှာဆိုလည်း လူတိုင်းရောင်းနေတာဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးတူပစ္စည်း ရောင်းတာချင်းတူတူ ဘာလို့ တစ်ချို့သူက ပိုပြီး အောင်မြင်ရတာလဲ။ ဝယ်သူတွေရဲ့ TRUST ကို ရတာနဲ့ မရတာနဲ့ဘဲ ကွာသွားတာပါ။ အခုမှ စမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်တာဘဲ ဟုတ်? ဒါပေမယ့် အိုင်ဒီယာအသစ်လည်း နည်းနည်းပါပြီး တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုပေါလည်း မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော်။
(သူတို့ပြောသွားခဲ့တာလေးထဲက တစ်ချို့ကို မှီးပြီး ပြောတာပါ။ သဉ္ဖာလည်း စီးပွါးရေးလိုင်းက မဟုတ်တော့ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ထဲမှာ စီးပွါးရေးလုပ်ဖို့ မပါသေးတော့ ကိုယ်ကတော့ လုပ်နိုင်မယ် မထင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်နိုင်မယ့်သူတွေကို လုပ်စေချင်တယ်။)
အိုင်ဒီယာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မသဉ္ဖာ ရေ.။ :)
ဒီဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ပြီး အခုမဟုတ် သည့်တိုင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ မြန်မာတွေထဲကလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်များ အကြံအစည် တစ်ခုခုရပြီး အောင်မြင်အောင် တစ်ခုခု လုပ်သွားနိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ မသဉ္ဖာရဲ့ မျှဝေပေးလိုတဲ့ စေတနာတွေရော၊ ဒါ အတွက် ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေပါ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သိနေပါ၏။
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ. :)
5/12/08 2:53 AM
ကိုမှော်ဆရာ>> အခုလို ဆက်ပြီး အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ :)
5/1/09 3:22 PM
Thank you so much for sharing, ma Thinzar!!
Today 6/17/09 is my first time reading your blog. I readafew articles and all are interesting and worth to know.. I will come back again and read more.
Please continue sharing with us.
18/6/09 2:55 AM
zanda>> thanks for your comment. really glad to hear that few of my posts interests you :)
18/6/09 10:23 AM